Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha AC Filter Capacitor - China AC Filter Capacitor Warshada
capacitor film oval lagu kalsoonaan karo oo sare loogu talagalay mashiinka raajada
Awoodda: 2.5 μF
Inta jeer ee la qiimeeyay: 50 Hz iyo/ama 60 Hz
danab lagu qiimeeyay: 660 VAC
Heerkulka deegaanka ugu sarreeya: -40 ℃ ilaa +70 ℃
Walxaha Dielectric: Filimka polypropylene bir ah
Filter capacitor AC (AKMJ-S)
CRE waxay samaysay filimkan nooca qalalan ee AC filter kaas oo xalliyey dhibaatada shaandhada AC ee caadiga ah.
1. Kiis bir ah oo weyn
2. tamar gaar ah oo sare
3. mowjadda gooyay birta PP filimka / PU kaas oo hubiya is-xakamaynta hoose, caabbinta dillaacsan iyo kalsoonida sare.
4. CRE kala duwan oo ka mid ah capacitor filter AC codsatay badbaado ah oo la isku halayn karo technology is-bogsiinta gacanta ka dhigi taxanahan si gaar ah ku haboon beddelayaasha awoodda jiidashada, drives, tamarta la cusboonaysiin karo, meelaha gudbinta korontada, awoodda network, iyo codsiyada UPS, iwm
filter AC (taxane AKMJ-PS)
Heerkulka adkeysi ee qoyaanka Tijaabi kulaylka qoyan, Xaalad deggan oo Voltage lagu qiimeeyay.
CRE AC capacitor filimku wuxuu awoodaa inuu si wax ku ool ah u kaydiyo tamarta la cusboonaysiin karo, xitaa jawiga shaqada ee aadka u daran.
Capacitor film qalalan ee korontada korontada
AKMJ-PS capacitor waxa uu awoodaa in uu si wax ku ool ah u kaydiyo tamarta la cusboonaysiin karo, xataa jawiga shaqada ee aadka u daran.
Kapacitor PCB-ga guntan sare leh oo loogu talagalay nidaamka awoodda sare
Taxanaha AKMJ-PS oo loogu talagalay in lagu dhejiyo pin terminal, oo ku dheji sabuuradda PCB.Si ballaaran loo isticmaalo qalabka korontada ku shaqeeya ee loo isticmaalo shaandhada AC.
Capacitor cusub AC filtarka casriga ah iyo codsiga UPS
CRE waxay soo saartaa tiro balaadhan oo ah capacitor film dielectric - laga bilaabo xal capacitor awoodda sare ee warshadaha iyo baabuurta, in capacitors filimada awoodda sare ku haboon dhammaan codsiyada elektarooniga ah oo ka badan kala duwan oo danab ah oo dhan 100V volts ilaa 100 kV.
Capacitor awood filim oo tayo wanaagsan leh
1: Xidhmada cajalad Mylar, oo lagu shaabadeeyey resin;
2: hogaanka lowska naxaasta, cabbir yar, rakibid fudud;
3:Awood weyn, cabbir yar;
4: Iska caabinta tamarta sare, oo leh is-bogsiin;
5: Dhaqdhaqaaq sare oo hadda jira, dv / dt sare oo u adkeysan kara.
Awood-hooseeya AC capacitor oo loogu talagalay rogayaasha mootada jiidista awoodda sare
Capacitor-kan taxanaha ah ee AKMJ-S waxa loo isticmaalaa in lagu nuugo oo lagu kaydiyo tamarta marka tamarta AC ay ka sarreyso waxa looga baahan yahay xamuulka DC-ga, iyo in la siiyo tamarta rarka marka tamarta AC ay ka hooseyso waxa loo baahan yahay.
Capacitor film bir ah oo loogu talagalay shaandhaynta AC
Capacitor AC AKMJ-MT
Capacitor-ka filimada ee AC shaandheynta oo leh habka is-bogsiinta, qaababka birta samaynta ee gaarka ah waxay xaqiijinayaan inductance qalloocan oo hoose iyo ka dib isku halaynta aad u sareysa.
Capacitor AC film danab sare leh oo leh hogaanka silig
Capacitor filimka AC AKMJ-PS
1. Naqshad cusub
2. Kiis adag
3. Capacitor filim tayo sare leh oo qiimo fiican leh
Capacitor-ka filimka AC oo si gaar ah loo nashqadeeyay
Saddex waji AC capacitor filter (AKMJ-S)
Is-bogsiinta, nooca qalalan, walxaha capacitor-ka ayaa la soo saaraa iyadoo la adeegsanayo si gaar ah oo muuqaal ah, mowjad gooyay metallized PP filim / PU kaas oo hubinaya is-xakamaynta hoose, caabbinta dillaaca sare iyo kalsoonida sare.Daboolka sare waxa lagu xidhay epoxy-saaxiibtinimo is-deminta.Naqshadaynta gaarka ah waxay hubisaa in is-dhaqaajin aad u hooseeya.CRE's AC filter capacitor ayaa caan ku ah jiidashada tareenka, korantada, maamulka tayada korantada, iyo codsiyada UPS.
Nooca qalalan ee daaran filimka AC capacitor oo leh qaab dhismeedka dhululubada
CRE waxay samaysay filim qalalan nooca AC capacitor filter kaas oo iska caabin kara danab sare leh oo leh awood is-bogsiin.Capacitors filter AC waxaa si gaar ah loogu talagalay wareegga AC.Waxay caan ku tahay in loo isticmaalo alaabada korantada elektiroonigga ah, UPS-ta awoodda sare leh, rogayaasha iwm.